Vonona Ho Amin’ny Raharaham-barotra i Afrika! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Septambra 2017 4:57 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra tamin'ny Martsa 2007)
Benin Mwangi no anarako. Miblaogy mikasika ny fandraharahana ao Afrika aho ary mamaky am-pifantohana tsara ireo blaogy maro liana amin'ny tontolon'ny varotra eo amin'ity tanibe ity. Ity no lahatsoratro voalohany ho an'ny Global Voices ary manantena aho manomboka izao fa ho afaka hanampy anareo hahafantatra bebe kokoa momba ny fiainan'ny varotra ao Afrika, amin'ny famerenana mijery ireo blaogy natokana ho an'izany lohahevitra izany. Manantena aho fa hankafy ianareo !
Iray amin'ireo « blaogera mpandraharaha » vakiako matetika i Harry Karanja. Avy ao Kenya izy no mitoraka blaogy ary tena ankafiziko ny lahatsorany nanomboka tamin'ny nahitako azy herinandro vitsivitsy lasa izay. Natokana ho an'ireo kenyana mpandraharaha sy avy ao Afrika atsinanana ny blaoginy Startups in Kenya [En]. Manolotra blaogy fandraharahana maro i Kenya ary maro amin'izy ireo no natao manokana ho an'ny mpamorona orinasa, fa tsy manam-paharoa ny blaogin'i A. Karanja satria ny ankamaroan'ny lahatsorany dia avy amin'ny traikefany ihany amin'ny maha mpandraharaha azy ao Kenya.
Ndeha ho raisina ohatra ny lahatsorany mitondra ny lohateny hoe Aterineto ao an-tanàna. Ao anatin'ny andian-dahatsoratra izay amaritany ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazana niainan'ny fiarahamonina aterinetony tamin'ny fikatsahana hampifandray ireo faritra ambanivohitra any Kenya amin'ny aterineto io. Fa aza mionona amin'io fanolorana io fotsiny, mila hoe ianao mihitsy no mamaky ity lahatsoratra ity. Manoratra izy:
«Rehefa nanokatra ilay ”cybercafé” aho, dia nataoko izay hahazoana antoka fa raharaham-barotra mahomby no ataoko, fa tsy elefanta fotsy. Ny hofantrano sy ny karama no vesatra fototra ho an'ny ”cybercafé”, ary ny vesatra miovaova, fifandraisana amin'ny aterineto, herinaratra sy ny fikarakaràna taratasy. Tena zavatra tsy maintsy atao ny ahatratraran'ilay ”cybercafé” ny fahamarinan-toerany dieny amin'ny volana voalohany. Rehefa avy nanao ny kaontinay, miaraka amin'ilay tompony, nanapaka hevitra ny hametraka ny vidin'ny iray minitra fifandraisana amin'ny aterineto ho 3 Shillings keniana (0.03 €) izahay, na dia nampiseho aza ny fandrefesanay fa, manomboka eo amin'ny isanà mpanjifa iray voarfaritra, azonay atao ny mampidina izany vidiny izany ho 1.50 Shillinn kenyana (0.016€). Rehefa avy nanapaka hevitra ny ho vidin'ny iray minitra, toa lasa mora ny mikajy ny isan'ny minitram-pifandraisana ilaina amin'ny volana voalohany mba ahazoana ilay fahamarinan-toerana. Noho ity kajy ity dia afaka namaritra ny tanjona ho tratrarina aho: mivarotra minitra X isam-bolana.
”Nanome fahafahana hahazo fomba fijery tsara ny fampandrosoana ny fiarahamonina ity tanjona mazava ity. Fa ny fanontaniana mahaliana dia ny hoe : ahoana no hivarotana ity isanà minitra ity ? Anisan'ny tombontsoa iray amin'ny asan'ny mpandraharaha ny fahafahana mifanaraka haingana amin'ny zavamisy, ary mba hitrandrahana izany tombony izany, tsy maintsy mihaino ny mpanjifa foana ilay mpandraharaha. Rehefa nanokatra ilay ”cybercafé” izahay, dia toa ireo ”cybercafé” rehetra hafa izany, fa nanomboka nihaino izahay…”
Mamelà ahy hizara aminareo topimaso kelin'ireo blaogy fandraharahana afrikàna maro izay horesahako.
Soratan'ilay nizeriana mpandraharaha, Emeka Okafor, izay tsy tokony hafangaro amin'ilay mpilalao baolina-basiketin'ny NBA mitovy anarana aminy ny blaogy Timbuktu Chronicles [En]. Natokana ho an'ny tontolon'ny orinasa ao Afrika ny lahatsorany, arahina lohahevitra mazava sy ilain'ny mpamorona orinasa.
Blaogin'i Tosin ny Money Talk [En]. Teraka tao Nizeria izy ary manao fianarana fandraharahana ao amin'ny California Institute of Technology amin'izao fotoana izao. Blaogy tsara mba hizarana hevitra mikasika ny vola, ny asa, ny raharaha, ary ny fampandrosoana ara-toekarena izy io. Ankoatra izay dia manome hevitra tsara mikasika ny fampiasambola ao amin'ny orinasa afrikana ihany koa izy.
Blaogy tsara miresaka mikasika ny fandraharahana ny Kenyan entrepreneur [En], indrindra ao Kenya. Mijanona ho tsy fantatra anarana ity mpitoraka blaogy ity, tsy fantatro na «izy» (lahy) na «izy» (vavy), fa tsy mety leon'ny vazivaziny intsony aho.
Blaogin'i Atoa. Annan avy any Ghana ny Annansi Chronicles [En]. Raha atao mazava tsara dia an'i Atoa J. Kofi Annan, fa tsy manana fifandraisana amin'ilay sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana taloha izy. Manana ny mampiavaka azy ny blaoginy miresaka ny raharaha ao Afrika : ny lafiny lamaody, ny indostrian'ny fampialamboly, ary ny ‘glamour’ no rakofany amin'ity taranja ity.
Blaogin'ilay mpandraharaha kenyan Odegle ny Odegle Nyang Investments [En], izay manampahaizana manokana amin'ny tsenam-bola kenyana [En]. Mifantoka amin'ny vaovaon'ny tontolon'ny banky sy ny tsenam-bola ao Kenya ny ankamaroan'ny lahatsorany, fa mety ahitana vaovao amin'ny ankapobeny mikasika ny raharaha ao Kenya ihany koa, ary avy amin'ny firenena maro ao Afrika.
Blaogy maro rantsana ny Investing in Africa [En], ny an'i Ryan Shen-Hoover sy ny an'i Coldtusker. Ny tiako ao amin'ity blaogy ity dia ny fifangarihan'ny fomban'ireo mpanoratra roa. Mitovy amin'ireo lahatsoratra azonao vakiana any amin'ny gazety ara-toekarena, na aiza na aiza erantany, ireo lahatsoratr'i Ryan Shen-Hoover. Ahitana ny tsenam-bola Afrikana rehetra ny lohaheviny. Tena mifanohitra hatrany amin'ny an'i Coldtusker, izay mitoraka blaogy mikasika ny tontolon'ny fitantanam-bola ao Kenya amin'ny fomba mivantana sy mazava kokoa, ny lohaheviny sy ny fomba fanoratany.
Zarain'ny gazety kameroney mitovy anarana aminy ny The entrepreneur [En]. Ny iraka tontosainy dia mampahafantatra sy mananatra ny mpamakiny amin'ny alalan'ny fampahalalana mivaingana, azo itokisana, mananatra, izay mankahery azy handroso hatrany ary hanandrana ny vintany.
Bankelele [En] no blaogera mpandraharaha be mpamaky indrindra ao Kenya. Manoratra mikasika ny fitantanambola sy ny fampiasambola ao amin'ity firenena ity, ary mametraka tolotrasa avy ao an-toerana amin'ny aterineto ihany koa izy.
Blaogy afrikana tatsimo ny Cherryflava [En], ary mitantara ny fivoaran'ny fampiroboroboana ny varotra sy ny raharahana any Afrika atsimo, ary any an-kafa koa.
Any Afrika Atsimo ihany koa i Dave Duarte [En]. Manoratra mikasika ny varotra izy ary mitonon-tena ho ”marketing geek”, manam-pahaizana ara-barotra mitodika betsaka any amin'ny Aterineto. Iray amin'ireo blaogera roa ao ambadiky ny Amplitude i Dave, podcast iray natokana ho an'ny varotra.
Tsy feno velively ity lisitra ity. Afaka manantena fitetezana amin'ny antsipiriany bebe kokoa mikasika ny sasany amin'ireo blaogy miresaka ny fandraharahana ao Afrika ireo ianao ao anatin'ireo herinandro ho avy.